Maxay tahay Sirta ka dambaysa in la weeraro Xarumaha Degmooyinka iyo Saldhigyadda,? Fariinta uu Dirayay Qarixii Maanta – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 22, 2017
Maalmihii ugu dambeeyay waxay Alshabaab billaabeen Weeraro ay la bartilmaameedsanayaan Xarumaha Degmooyinka iyo Saldhigyadda oo aan ahay Dhaqan horay looga bartay. Waxayna 2 dii Weerar ee ugu dambaysay ku qarxiyeen Xarunta Degmadda Wadajir iyo Saldhiga Booliska Waabari.
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa in Alshabaab ay doonayaan inay Dawladda Somalia soo koobaan Xarumaha iyo Xafiisyadda ay ku shaqeeyaan, kuna qasbaan Hay’adaha Dawladda inay ku soo koobnaan Madaxtooyadda iyo agagaarkeeda. Waxayna Macluumaad dhexdooda laga helay muujinaysaa inay qorshaynayaan Weeraro kale oo ay ku qaadaan Xarumo hor leh.
Sirdoonka Somalia ayaa aaminsan in arrintan ay ku doonayaan Alshabaab inay ku qasbaan Maamuladda Degmooyinka oo u badan Qurbo Joog inay ka soo firxadaan Xafiisyadooda kuna soo koobnaan Hoteeladda Waawayn iyo Madaxtooyo. Waxay sidoo kale doonayaan inay Saldhigyadda Booliska ku mashquuliyaan inay waardiyaystaan Xarumahooda oo ay isugu geeyaan Awoodooda, kana hor istaagaan inay sameeyaan Roondo, Maadaama uusan Ciidanku u kala qaybsamin.
Gud Degmooyinka iyo Taliyayaasha Saldhigyadda ayaa billaabay inay xakameeyaan Dhaqdhaqaaqooda, isla markaana ay soo wajahday Cabsi la xiriirta Ammaankooda. Waxayna durba billaabeen Degmooyinka iyo Saldhigyadda inay xirtaan Jidadka soo galla, isla markaana soo dhoobaan Xarumahooda Ciidamo dheeriya oo ay ku illaalinayaan Ammaankooda.
Bartilmaameedsiga Alshabaab ee Saldhigyadda iyo Degmooyinka waxay u muuqataa inay ka gaareen Hadafkii ay lahaayeen, marba haddii ay Xarumahaasi Awoodoodii isugu geeyeen inay is illaaliyaan, iyagoo gabi ahaanba joojiyay Shaqooyinkii ay ka hayeen Degmooyinkii ay u xil saarnaayeen.
Saldhigyadda Booliska Gobalka Banaadir waxaa haysta Caqabad Qalab iyo Ciidan. Waxayna Saraakiisha Saldhigyadda qaarkood ay ka cabanayaan in Ciidamadda ku qoran aysan soo shaqa tagin oo ay kala wataan Masuuliyiin Dawladeed oo aan laga reebi karin, taasina ay keentay inay habacsanaan soo gashay Hawlahooda, Mana awoodaan xittaa inay illaashadaan Amniga Saldhigyadooda.
Alshabaab Qarixii Maanta waxay dirayaan Fariin kale oo ahayd in haddii la xiray Jidadka Xaafadaha xittaa ay imaan karaan Wadada Halbawlaha ee Maka Al Mukarama oo ay Dawladda Somalia isugu gaysay Awoodeeda. Waxaana Wadadaasi meelo badan laga sameeyay Baro Koontarool, iyadoona la mamnuucay in Gaadiidka la dhigto Jidadka.
Dawladda Somalia oo dadaal ugu jirta Sugidda Amniga Muqdisho ayaa looga fadhiyaa inay Caqabadan wajahdo, Xalna ka gaarto si Amniga Caasimadda oo Maalmahan faraha ka sii baxaya uu u soo hagaago.
Burburka Xarunta Degmadda Wadajir